Baarlamaanka Somalia oo Maanta kulan yeelanaya iyo Farmaajo oo hortegaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamaanka Somalia oo Maanta kulan yeelanaya iyo Farmaajo oo hortegaya
Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee waqtigoodu dhammaaday ayaa Maanta oo sabti ah kulan gaar ah ku yeelan doona Xarunta Villa Hrageysa ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxaa goor sii horreysay oo shalay aheyd lagu wargeliyay inuu jiro kulan gaar ah oo Madaxweynaha soo codsaday, isla markaana laga doonanayo in Mudanayaasha inay kasoo qeyb galaan.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa saaka kasoo ambabixi doona halkaas, si uu uga soo qeyb galo kulanka Maanta ee Xildhibaanada, kadib markii lagu kala tegay Shirkii Madaxda uga socday Dhuusamareeb.
Saacadhii lasoo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ka socday abaabulka kulanka Maanta ee Xidlhibaanada Baarlamaanka, kaasi oo ay wadeen Xildhibaano iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda oo doonaya in kulankaas uusan baaqan.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shaaciyay in aysan jirin kulan wadajir ah oo ay yeelanayaan Xildhibaanada oo uu soo codsaday Madaxweyne Farmaajo, hayeeshee waxaa arrintaas ka horyimid Senataro ka tirsan Aqalka Sare oo sheegay inay ka qeyb geli doonaan kulankaas.
Dowladda oo shaacisay in lagu kala tegay Shirkii ka socday Dhuusamareeb
Axmed Madoobe oo ka hadlay sababta fashilka Shirkii Dhuusamareeb